Imaski Yokuvikela Iyathengiswa
Imaski evikelekile ifaka imaski yokuvikela nsuku zonke kanye nemamaski yokuzivikela kwezokwelapha
Imaski yokuvikela nsuku zonke
Umzimba wemaskhi wemaski wokuvikela nsuku zonke wenziwe ngezinto zokuhlunga. Imaski yokuvikela nsuku zonke ihlukaniswe kakhulu ngamaski othuli namamaski we-anti-virus.
Imaski yothuli inakho ukuvikela kuma-aerosols othuli ayingozi. Imaski enobuthi obuthuntu ngokuvamile imise inkomishi, engakwazi ukugcwala umlomo nekhala kahle ukuze kufezekiswe umphumela wokuvimbela uthuli. Amaski othuli ajwayele ukusetshenziselwa ukuvimba uthuli nomoya ophelile, kepha awukwazi ukuhluza amagciwane.
Imaski elwa ne-virus yimishini yokuvikela yokuphefumula esetshenziselwa ukuvikela izitho zokuphefumula ezinsizeni eziyingozi ezinempi yempi kanye nothuli olunemisebe.
Ubuso bemaskhi yokuvikela yezokwelapha ihlukaniswe izingqimba zangaphakathi, eziphakathi nezangaphandle. Ungqimba lwangaphakathi luyi-gauze ejwayelekile yokuhlanzeka nendwangu engeyona eyokwelukiweyo.Umugqa ophakathi nendawo ungqimba lwe-polypropylene fiber encibilikisiwe. Ungqimba lwangaphandle yindwangu engalukiwe kanye ne-polypropylene ye-Ultra-elincanyana encibilikayo.
I-hydrophobic kakhulu futhi ingaphefumula.Inomphumela obalulekile wokuhlunga kuma-aerosols amancane wegciwane kanye nothuli oluyingozi oluhle. Umphumela wokuhlunga wonke muhle, futhi izinto ezisetshenziswayo azinobuthi futhi azinabungozi.Intofontofo ukugqoka.
Kungavikela ukutheleleka okubangelwa wububanzi bendawo yomoya ≤ 5μmg ukutheleleka kanye nokuxhumana okukude nezifo ezithwalwa yimfucumfucu. Ukusebenza kokuhlunga kwezinhlayiyana kwezinto zemaski akuyona ngaphansi kwama-95%, futhi izinga lokuvikela liphezulu.
Imaski yokuvikela ezokwelapha isetshenziselwa ukuvikela umzimba womuntu kusuka ezinhlayiyeni ezimisiwe emoyeni, ukuvikelwa kwabasebenzi bezokwelapha ezindaweni zezifo ezithathelwanayo, ukuvikelwa kwabasebenzi begciwane elenziwa ngegciwane, ukuvikelwa kwezinhlobo ezahlukahlukene zabasebenzi ngesikhathi sosizi lwezifo ezithathelwanayo, ezinobuthi amakhemikhali, abasebenzi bezimayini, abasebenzi bokungalungisi impova, njll.